वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : एउटा रुख
Posted by Basanta at 8:58 PM
Labels: तस्बीर मात्रै
Chaitanya December 4, 2011 at 9:30 PM
अनेकौं आकृति ?
देवेन्द्र पाण्डेय December 4, 2011 at 10:23 PM
पेड़ एक.. अनुभूति अनेक।
Luna December 5, 2011 at 4:05 AM
दीपक जडित December 6, 2011 at 10:50 AM
तस्वीर खिच्नलाई कुनै अब्जेक्टमाथि तपाईंको तपाईंको गहीरो दृष्टिकोण छ पहिले त तस्वीरमा ।
त्यसपछि अरु जे जे छ तस्वीरमै छ ।
प्रतिक्रियामा पो अचम्म देखियो भन्या । लुनाजीले स्वयँ नै त्यो प्रतिक्रिया लेख्नुभएको हो भने पुरुष (जन)ईन्द्रिय भने मात्र पनि सबैले बुझ्थे नै होला । पहिले त म पुषको जाडो पढ्दैथिएँ, लुनाजीले त्यस्तो लेख्नुहुन्छ भन्ने नसोचेर होला । तर लेखिएको त अर्थोकै पो रहेछ ।
प्रबिण थापा December 6, 2011 at 7:09 PM
तस्बिर आफै बोलेको छ। जहाँसम्म लाग्छ लुना जी!को नामबाट उहाँलाई बदनाम गराउन यो प्रतिक्रिया लेखिएको हो की भन्ने आशंका मनमा जागिरह्यो। लेख्नै नहुने शब्द भनेर म भन्दिन तर लुना जी बाट यो असंभब छ उहाँलाई चिनेको आधरमा। बाँकी सत्यता उहाँकै प्ररिक्षामा।
Basanta December 13, 2011 at 3:54 PM
दीपकजी, प्रबिणजी; म पनि 'लुना'को नामबाट आएको उक्त प्रतिकृयाबाट छक्क परेको छु (त्यसलाई मेटिदिनुनै ठिक लाग्यो मलाई)। यस्तो प्रतिकृया साइबरजगतमा हामी सबैकी चिरपरिचित लुनाजीबाट होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर प्रतिकृयालाई पछ्याऊँदा लुनाजीकै ब्लगमा लान्छ। लुनाजीको खाता कसैले ह्याक गरेको हो कि? लुनाजीबाटै जवाफ आए राम्रो हुनेथियो।
जहाँसम्म तस्बीरलाई अर्थ्याउने कुरा छ, खिच्दा र ब्लगमा राखुञ्जेलसम्म पनि मैले त्यता ध्यान दिएको थिईँन। रुखको आकार विशेष लागेको थियो, बस तेत्ति। ब्लगमा राखीसकेपछि भने काखमा सानो बच्चा राखेर उसैसंग कुरा गरीरहेकी आमाको झलक देखेको थिएँ।
अर्को खाले अर्थको त दिमागमा छनक सम्म थिएन।